Budada Pramiracetam (68497-62-1) hplc = 98% | AASraw Nootropics
/ Products / Nootropics budada / Budada Pramiracetam
Rating: SKU: 68497-62-1. Category: Nootropics budada
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa amar guud ee budada Pramiracetam (68497-62-1), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Budada Pramiracetam waa nooc ka mid ah jilicsanaanta jilicsan ee loogu talagalay ujeedada horumarinta garashada, iyadoo caddaynta hordhaca ah ay ku taageereyso adeegsigeeda caawinta sameynta xusuusta muddada fog. Inkasta oo qaababka aan si fiican loo garanayn, waxaa laga yaabaa in ay kor u qaadaan qalabka 'acetylcholine'.
Fiidiyowga budada ah ee Pramiracetam
Root Pramiracetam Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Budada Pramiracetam
Qaaciddada Molecular: C14H27N3O2
Miisaanka kelli: 269.38
Dhibcaha Biyaha: 45.0-49.0 ° C
Budada Dhiiga Pramiracetam ee wareegga daroogada ee SMART
Coluracetam (MKC-231) waa daroogada jilitaanka ah ee loo yaqaan 'drug optic'. Waxay awood u leedahay inay ilaaliso qoob-ka-soo-saarka qanjirrada marka ay si kale u nugul yihiin, laakiin hadda ma jiro wax caddayn ah saameyn aan laheyn.
Isticmaalka budada ah Pramiracetam
Waqtigaan, caddaynta isticmaalaya budada Pramiracetam ee bini-aadanka ayaa isticmaala marxaladda 400mg maalin walba ama laba jeer maalintii 600mg; Labada nooc ee daawooyinka loo qaato labadaba waxay isu jiraan xamiinmmg oo ah budada Pramiracetam maalin kasta.
Ma hubo haddii budada Pramiracetam waa in la qaataa cuntooyinka, mana cadda haddii 1,200mg uu yahay qiyaasta ugu fiican ama aan ahayn. Tani waxay, si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqanaysaa mid firfircoon.
Waa maxay noocyada natiijooyinka ee aan ka filayo budada Pramiracetam
Dufanka Pramiracetam ayaa wax ka taraya waxqabadka maskaxda wuxuuna bixiyaa horumarinta garashada calaamadaha, gaar ahaan marka la xasuusto xusuusinta iyo soo noqoshada.
Sababtoo ah waxay inta badan abuurtaa dareen la dareemi karo oo la socota qadar go'an oo qulqulo dareen ah, waxaa badanaa la barbar dhigaa Ritalin. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka ugu ballaadhan ee budada Pramiracetam waa sida soo socota:
Xasilada Hagaajinta - Sababtoo ah waxay kicisaa hippocampus, qayb ka mid ah maskaxda oo ka masuul ah sameynta xusuusta cusub, budada cayriin ee Pramiracetam waxaa loo yaqaana sidii kor u kaca xasuusto aad u xoog badan. Isticmaalayaasha intooda badani waxay soo sheegaan waxoogaa horumar ah oo ku saabsan sameynta xusuusta iyo xawaaraha dib u soo noqoshada, sheegasho ah in lagu caddeeyay daraasaadka xayawaanka.
Awoodda Waxbarashada La Ballaariyey - Isticmaalayaasha ayaa sheegaya in budada Pramiracetam ay waxbarashadu si dhakhso ah u fududeyneyso, sahlan tahay, iyo xiiso badan. Tan waxaa lagu sharxi karaa ugu yaraan qeyb ka mid ah fudaydinta budada Pramiracetam ee neuroplastic weyn.
Maqnaanshaha Maskaxda iyo Cadaadiska - Sida caadiga ah isticmaalayaashu waxay soo sheegaan in qaadashada budada Pramiracetam ay siinayso dareemo adag oo feejignaan maskaxeed, diiradda, sameynta fikrad degdeg ah, iyo feker cad.
Fursadaha Bulshada - Isticmaalayaal badan ayaa sheegaya in qaadashada budada Pramiracetam ay ka caawiso iyaga inay ku raaxaystaan ​​oo ay si buuxda uga qayb qaataan xaaladaha bulshada, faa'iido ay u badan tahay inay la xidhiidho waxqabadka guud ee maskaxda maskaxda, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa mid la xidhiidha saameyntiisa dareenka ah, taas oo yareyn karta bulshada walaac.
Aqoonta Dareenka ee Hagaajinta - Isticmaalayaasha badanaa waxay soo sheegaan garashada ama kor u qaadida dareenka, oo ay ka mid tahay midhayn dheellitiran oo muuqaal leh iyo muuqaal muuqaal leh oo muuqaal leh oo leh farshaxan weyn.
Xasuusashada Maqalka - Dhibaatooyinka maskaxda ee xaddidan, budada Pramiracetam ayaa lagu muujiyay inay tahay daaweyn wax ku ool ah oo ku saabsan xusuusta luminta iyo dhibaatooyinka kale ee garashada maskaxda ee ay sababaan dhaawacyada maskaxda. Sidoo kale waa mid ka mid ah nootropics kala duwan oo lagu tijaabiyey Maraykanka sida daaweyn suuragal ah oo la xiriirta xusuusta oo la xiriirta cudurka Alzheimer iyo cudurada kale ee neerfayaasha. Hal daraasad ayaa xitaa muujisay in ay awood u leedahay in lagu celiyo amnesia oo loogu talagalay kuwa mutadawiciimo caafimaad leh laga bilaabo da'da 18-65.
Sidee budada Pramiracetam loo shaqeeyo
Sida badi nootropics, budada Pramiracetam waxay saameyneysaa sii deynista neurotransmitters, kiimikada maskaxda oo gudbisa calaamadaha hal unug ee dareemayaasha. Laakiin budada Pramiracetam ayaa si aan toos ahayn u socodsiinaysa, habab kala duwan oo ka duwan tallaabooyinka caadiga ah ee cunsurada, iyo sidoo kale maskaxda si siyaabo kale loo kiciyo.
Si ka duwan noocyada burcad-badeedda, Noopept, iyo budhcad-badeedda kale ee caan ah, budada budada ah ee Pramiracetam waa barbaro badan halkii ay ka dhalan karto biyaha, taas oo macnaheedu yahay in lagu xannibo dhiigga iyadoo la adeegsanayo asiidh dufan. Waxay gaadhsiisan tahay xajmiga ugu sarreeya iyo bioavailability ugu dhakhsaha badan, guud ahaan gudahood 30, waxana uu leeyahay saacado dhexdhexaad ah oo dheer oo ah 4-6.
Inta badan cunsuradu waxay u shaqeeyaan si toos ah kicinta goobo gaar ah oo loo yaqaan 'neurotransmitter reseptors and thus increasing the production and releasing of neurotransmitters, laakiin budada Pramiracetam si toos ah ma keento isbeddellada heerarka neurokimiga, mana u muuqato in ay leedahay ilmo dareen weyn oo ah neurotransmitter weyn.
Hawlgalkeeda tooska ah ee tooska ah waa korodhka weyn ee kor u kaca soodhaweynta sare ee hippocampus, qayb ka mid ah maskaxda muhiim u ah sameynta xusuusin muddo dheer ah.
Choline waa horudhac ah acetylcholine, neurotransmitter oo si weyn ugu lug leh geeddi-socodka fahamka oo ay ka mid yihiin xawaarida barashada, xasuusta, iyo xoojinta.
Iyadoo kicinaysa baruurta, Pramiracetam khasaare cayriin ah ayaa si aan toos ahayn u saameynaya sii daaya acetylcholin waxayna kicineysaa waxqabadka kordhay hippocampus. Sababtoo ah qaybtan maskaxdu waa mid muhiim u ah hawlaha xasuusta, kicinta guud ee ah in budada Pramiracetam abuurto horumarinta labadaba xusuusta cusub iyo xusuusinta tixraaca ama xusuusta mudada dheer. Hawlaha kor u kaca ee hippocampus ayaa sidoo kale kordhiya socodka dhiigga maskaxda, taas oo kor u qaadaysa feejignaanta iyo hagaajinta awoodda garashada guud.
Dufanka budada ah ee Pramiracetam ayaa leh habab kale oo ficil ah. Cilmi-baadhayaashu waxay muujinayaan in marka lagu daro saamaynta maskaxda, falalka budada ah ee Pramiracetam ee goobaha dhuumaha ka baxsan maskaxda ee ku tiirsan qanjirrada adrenal. Daraasaadka xayawaanku waxay soo jeedinayaan in budada Pramiracetam ay sidoo kale kordhin karto ama soo celinayso dheecaanka xuubka maskaxda, taas oo sahlaysa unugyada unugyada.
Si ka duwan noocyada kale ee faretamamka fasalka, buundada cayriin ee Pramiracetam uma muuqato inay si firfircoon u bedesho wacyigelinta ama dareenka dareenka. Tan waxaa lagu sharraxi karaa saamaynta kooban ee budada Pramiracetam ee wax soo saarka iyo sii-deynta dadka neurotransmitters ee saamaynta ugu weyn ku leh niyadda iyo welwelka sida serotonin, GABA, iyo dopamine.
Budada Pramiracetam waa mid ka mid ah waxyaalihii ugu xiisaha badnaa ee la heli karo, oo bixiya awoodda ugu weyn ee midabtakoorka fasalka.
Tallaabadeeda gaarka ah waxay wax ka tareysaa shaqada guud ee maskaxda, hagaajinta xasuusta, awoodda barashada, diiradda, iyo xitaa dareemida dareemayaasha.
Waxay si fiican u shaqeyneysaa nafteeda waxayna noqon kartaa mid aan qiimo lahayn oo ku habboon diidmo kale, kor u qaadista iyo kordhinta saameyntooda.
Si dhakhso ah u noqoshada ardayda, qorayaasha, iyo qof kasta oo xiiseynaya xoojinta awooddooda maskaxeed, budada Pramiracetam waxay u tahay dad badan, laakiin waxay bilaabaysaa inay hesho aqoonsi si fiican u shaqeeya oo loo yaqaan "nootropic".
Budada Pramiracetam waa derajada synthetic ee piracetam, helay oo ay soo saareen Parke-Davis ee 1970s. Waa dheellitir gaar ah, oo lagu qiyaaso inay ka timid 5-30x ka awood badan budhcad-badeeda.
Waxaa lagu iibiyaa Yurub iyadoo la adeegsanayo magaca Brandt Neupramir, Pramistar, iyo Remen waxaana loo qoraa daaweynta dysleksi, ADHD, waallida iyo dhibaatooyinka xusuusta uu keeno cudurka Alzheimer iyo xaaladaha kale ee neerfaha.
Waxaa lagu macaamilay Maraykanka oo ku yaal 1979 balse aan ogolaanin USFDA isticmaalka khaaska ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa si weyn loo baaray sida daaweyn suurtagal ah oo ku saabsan dhibaatooyinka garashada iyo xusuus la'aanta la xiriirta cudurka Alzheimers iyo dhaawaca maskaxda. Waxaa sidoo kale lagu barayaa sida daaweyn loogu talagalay noocyada kala duwan ee nidaamyada habdhiska dareenka dhexe.
Pramiracetam Root Powder
Pramiracetam Rooti Khafiif ah
Suuq-geynta Shirkadda Pramiracetam ee Suuq-geynta
Biyaha budada ah ee Pramiracetam ma leeyihiin waxyeello dhinac kasta ah
Budada Pramiracetam badanaaba waa loo dulqaataa xataa xitaa qiyaasta sare, iyo waxyaabo aad u yar oo dhibic ah ayaa la diiwaangeliyey.
Saameynta ugu badan ee la sheego waa madax xanuun, kaas oo badanaaba laga hortagi karo adoo qaadanaya siyaado dheeraad ah.
Waxyeellooyin aan caadi ahayn, oo ay ku jiraan xanuunka murqaha iyo dareenka dareenka ama kacsanaanta, ayaa guud ahaan lala xiriiriyaa qiyaasta sareysa, sidaas darteed, waa in laga fogaadaa iyadoo la yareeyo qiyaasta qiyaasta.
Budada Pramiracetam waa mid aan la qabatimayn, oo aan saameyn xun ku yeelanin isticmaalka muddada dheer ayaa la diiwaangeliyay. Xaqiiqdii, waxaa jira caddayn ah in xoojintani ay xitaa kor u qaadi karto caafimaadka maskaxda iyo ilaa xad xawilaadda soo noqoshada maskaxda gaboobay.
Sida loo soo iibsado budada Pramiracetam laga bilaabo AASraw